"ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၀၈:၅၇၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ
၆ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၅ နှစ်
၀၃:၃၇၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
Yinmyo (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
၀၈:၅၇၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို [[အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး]] (HIV) ရှိသူများတွင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချစွာပေးနိုင်သည်။ ဆေးထိုးသောနေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းနှင့် အနည်းငယ်[[ကိုယ်ပူခြင်း]]စသော မပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာဖြစ်တတ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းတွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားတတ်သည်။ လူပေါင်းတစ်သိန်းတွင် တစ်ယောက်ခန့်မှာ [[ပြင်းထန်သော ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှု]]ဖြစ်တတ်သည်။ [[ဂီလန်ဘာရေး ရောဂါလက္ခဏာစု]] (Guillain–Barré syndrome)၊ [[ဖွံ့ဖြိုးမှုချို့ယွင်းသောရောဂါ သို့မဟုတ် အော်တစ်ဇင်]] (autism) နှင့် [[အူလမ်းကြောင်းရောင်ရောဂါ]] (inflammatory bowel disease)တို့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများ ပိုများလာလေ့မရှိပါ။<ref name="WHO2009Vac"><cite class="citation journal" contenteditable="false">[http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf "Measles vaccines: WHO position paper."] </cite></ref>
ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို သီးသန့်ဆေးအဖြစ်နှင့် အခြားကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ရောစပ်ထားသောဆေးအနေဖြင့်ပါ ရရှိနိုင်သည်။ [[ဂျိုက်သိုးရောဂါကာကွယ်ဆေး]]နှင့် [[ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး]]များနှင့် ရောစပ်ထားသောဆေးမှာ [[အမ်အမ်အာ]](MMR) ဟုခေါ်ပြီး<ref name="WHO2009Vac"><cite class="citation journal" contenteditable="false">[http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf "Measles vaccines: WHO position paper."] </cite></ref> (၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးရရှိခဲ့သည်။<ref><cite class="citation web" contenteditable="false">[http://www.immunize.org/timeline/ "Vaccine Timeline"]<span class="reference-accessdate">. </span></cite></ref> ၄င်းကာကွယ်ဆေး(၃)မျိုးတွင် [[ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး]]ကို ထပ်မံရောစပ်၍ အမ်အမ်အာဗွီ(MMRV)ဆေးအနေဖြင့် (၂၀ဝ၅)ခုနှစ်တွင် စတင်ထိုးပေးခဲ့သည်။<ref><cite class="citation book" contenteditable="false">Mitchell, Deborah (2013). </cite></ref> ဤကာကွယ်ဆေးသည် မည်သည့်ရောစပ်နည်းဖြင့်မဆို အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းစွာရှိသည်။ ဝက်သက်ရောဂါအဖြစ်များသောနေရာများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ကလေးအသက်(၉)လတွင် ထိုးပေးရန် [[ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့]]မှ အကြံပြုထားသည်။ ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနေရာများတွင်တော့ ကလေးအသက်(၁၂)လတွင် ထိုးပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသက်ရှိသေးသော်လည်း အားပျော့သည့် ဝက်သက်ရောဂါပိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အခြောက်ခံထားသောအမှုန့်အနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင်ပြီး ထိုးခါနီးတွင် သတ်မှတ်ထားသောဆေးရည်ဖြင့် ရောစပ်ရ၍ အရေပြားအောက် သို့မဟုတ် ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးသွင်းရသည်။ထိုးနှံရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၊မရှိကို သွေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။<ref name="WHO2009Vac"><cite class="citation journal" contenteditable="false">[http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf "Measles vaccines: WHO position paper."] </cite></ref>
(၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတလွှမ်းရှိ ကလေးပေါင်း(၈၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးဖြစ်သည်။<ref name="WHO2014"><cite class="citation web" contenteditable="false">[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/ "Measles Fact sheet N°286"]. ''who.int''. </cite></ref> (၂၀ဝ၈)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း(၁၉၂) နိုင်ငံ၌ ဤကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပေးကြသည်။<ref name="WHO2009Vac"><cite class="citation journal" contenteditable="false">[http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf "Measles vaccines: WHO position paper."] </cite></ref> ဤကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၆၃)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။<ref name="Yellow2014"><cite class="citation book" contenteditable="false">Control, Centers for Disease; Prevention (2014). </cite></ref> ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် [[အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်]]အတွက် [[အဓိကလိုအပ်သောဆေးများ]]ထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။<ref><cite class="citation web" contenteditable="false">[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf?ua=1 "WHO Model List of EssentialMedicines"] (PDF). </cite></ref> (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် ဤကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးကို လက်ကားဈေး (ဝ.၇၀) ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။<ref name="WHO2009Vac"><cite class="citation journal" contenteditable="false">[http://www.who.int/wer/2009/wer8435.pdf "Measles vaccines: WHO position paper."] </cite></ref><ref><cite class="citation web" contenteditable="false">[http://erc.msh.org/dmpguide/resultsdetail.cfm?language=english&code=MEA00X&s_year=2014&year=2014&str=&desc=Vaccine%2C%20Measles&pack=new&frm=VIAL&rte=INJ&class_code2=19%2E3%2E&supplement=&class_name=%2819%2E3%2E%29Vaccines%3Cbr%3E "Vaccine, Measles"]. </cite></ref>
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/288763" မှ ရယူရန်